I-First Train Uhambo Ever Made In Italy | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > I-First Train Uhambo Ever Made In Italy
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 19/09/2020)
Italy ezinye uhambo ngololiwe emangalisayo. Kuye inani koololiwe amahle izikhululo kakhulu kulo lonke ilizwe, kodwa apho i uhambo uloliwe wokuqala eyenziweyo ElamaTaliyane?
I-First Train Uhambo Ever Made in Italy – Isiqalo
Uhambo Uloliwe wokuqala eyenziweyo ElamaTaliyane introduced railways was when Italy was a divided lizwe. Kwadlula iminyaka ethile nokunxibelelanisa uze uqhagamshele imizila kaloliwe okhoyo emva Italy united. Umzila wokuqala kaloliwe owakhiwa yi-Italiya yayiyiNaples ukuya ePortici owawukubo Bukumkani beeSicilies ezimbini. Umgca kwaba 7.25 ubude. Umgca bayivula ku 3rd Okthoba 1839. Oku kwaba 9 kweminyaka emva lwakwakhiwa umgca wokuqala 'mihla' ngaphakathi-mzi yaba Liverpool and Manchester Railway.
Ingoma yokuqala yaba umkhondo kabini kwaye babaleka ukusuka site ekhoyo Corso Garibaldi e Naples ukuya iRoyal Palace e Portici. Ibhotwe lasebukhosini kwaba emazantsi yayingeyiyo iNtaba iVesuvius. Abantu kuqala wenza i uhambo ngololiwe ukuya Italy apha, yaye le layini ngoku kuyinxalenye kaloliwe Naples-Salerno.
Umgca kaloliwe Naples-Salerno yeyona kaloliwe umgca enkulu kwi inethiwekhi kaloliwe Italian today and has a place in The First Train Trip Ever Made in Italy. Yenza ikhonkco kwi kumgca esiqwini ku Southern Italy. sekhilomitha wokuqala Umgca yeyona kaloliwe lokuqala. Ngoku Abantu basebenzisa uloliwe ukuya kwenye kakhulu iindawo ezaziwayo-kakuhle, a famous coastal town called Amalfi in the region of Campania. Le yidolophu entle unxweme. Yinto ekhuselekileyo ukuba bathi uhambo ukuya apho kunye namanxweme iyafana. Cinga crystal amanzi, esimhlophe ne uhlaza oluchumileyo yaye phakathi kwezinye izakhiwo ezindala ezimnandi ezintsha. Uya kuba phezu indlela yakho okucinga uhambo lwakho ngololiwe ukusuka Naples ukuya Salerno, apho ke uya kukhwela ibhasi okanye ezinye iindlela zakho ahlelwe zothutho ukuya Truck.
Ngoko ke kwenzeka ntoni kumgca Naples-Portici? I-Faculty of Agriculture of the University Naples Federico II yeyona umsebenzisi iphambili yale umgca ngenxa ukufikelela yayo lula kwiNtaba iVesuvius. Indlela yokuqala uhambo ngololiwe e Italy isekhona namhlanje.
Imizila kaloliwe wokuqala e-Italy yavula indlela ikamva lokuhamba koololiwe elizweni. Ezinye zeendawo awaya kaloliwe ezona zintle apha. Ekhumbula uhambo lokuqala uloliwe wakha eyenziweyo Italy, sinokuqiniseka ukuba nangona a lot itshintshile. Le ndawo sele wahlala kanye njengokuba ovusa ke njengokuba kunjalo ngoku.
So now that you learned about The First Train Trip Ever Made in Italy, are you thinking of Nokufumana indawo A Train iTikiti for a European train trip? Kutheni ukuthatha 3 imizuzu kwisayithi yethu ukufumana amatikiti zibiza nemizila zakho. Ngena kwi site yethu ngoku ukuba Uqeqesha Book.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-first-train-trip-ever-made-in-italy%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona lungisela.
train Travel uhambo ngololiwe travelitaly